Umsakazi woMgungudlovu FM ugubhe elokuzalwa ngokuhlomisa abesimame | News24
Umsakazi woMgungudlovu FM ugubhe elokuzalwa ngokuhlomisa abesimame
UNksz Nana Makhanya (ophakathi nendawo) ugubhe iminyaka engu-55 ngokuhlomisa abesifazane ngezindlela zokuzithuthukisa emcimbini obuse city hall ngeledlule. Lapha uthathwe namadodakazi akhe u Tiny no Nonhl
UMSAKAZI woMgungundlovu 107.6 FM odume ngele ‘Ngelosi engenamaphiko’ ugubhe iminyaka engu-55 yokuzalwa ngokuhlomisa imbokodo ngamacebo okuzithuthukisa.
UNksz Nana Makhanya ugubhe usuku lwakhe lokuzalwa, inyanga yabesifazane waphinde wathula ngokusemthethweni inhlangano yakhe engenzi nzuzo iZithande Community Development, emcimbini obusehholo ledolobha hall ngeledlule.
UMakhanya ongowokudabuka endaweni yaseMpophomeni wasungula le nhlangano ngo-1997 ngenhloso yokukhuthaza abantu ukuba bashintshe ukwenza ukuze kulwiswane nokutheleleka kwabantu ngegciwane lengculazi.
Kulona lolu suku obelugabe ngezinkulumo ezakhayo ezehlukene, kuphinde kwakhanyiswa namakhandlela ukukhulekela izingqinamba ezibhekene nabesifazane bakuleli.
Ekhuluma ne-Echo uthe: “Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane futhi kuyinyanga engizalwa ngayo ngibone kukuhle ukuba ngiqoqe abesifazane ndawonye, ukuze sakhane sikhulume ngezinto ezingathuthukisa izwe. Okokuqala sikhulume ngokuthi abesifazane bangawenza kanjani umehluko kubona, emindenini yabo nasemphakathini abayakhele. Kubalulekile ukuthi kube khona izinto abazenzayo eceleni ukuzithuthukisa okungabalwa ukudlala izitokofela.
“Abesifazane sebenikwe amathuba amaningi kunesikhathi sangaphambilini, okumele bawasebenzise lawo mathuba ngokuzisungulela amabhizinisi abo. Siphinde sakhuluma futhi ngokubaluleka kokuzithanda, ukudla ngendlela efanele nokuvocavoca umzimba ukuze uhlale uphilile.
“Ekugcineni sikhanyise amakhandlela ukuze sikhuleke kuNkulunkulu ukuthi abuyise isithunzi somuntu wesifazane nesizathu amdalela sona, sicele nokuthi asikhanyisele ezingqinambeni esibhekene nazo.”
UMakhanya uthe bekuyiphupho lakhe leminyaka ukuthi athule le nhlangano ngokusemthethweni.
Uthe: “Emva kweminyaka ngisebenza njengomeluleki walabo abusuleleke ngegciwane lengculazi, ngabona ukuthi yize kukhulunywa kakhulu ngalesi sifo, abantu abaguquki endleleni abaziphatha ngayo.
“Ngangifuna ukukhuthaza abantu ukuthi bashintshe, kodwa ngaphambi kokuthi bashintshe ushintsho luqala kumuntu ngaphakathi. Esigxile ngakho kule nhlangano ukucathulisa abantu ukuthi bashintshe, ngoba esikutholayo ukuthi abantu abafuni ukushintsha ngoba babambelele ezimweni ezibuhlungu esezadlula.
“Sikhuthaza ukuthi abantu bazixolele bona ngaphakathi , ngaphambi kokuba bafune ukushintsha izimpilo zabo.”